Aabbe aan maanta kaaga sheekeeyo nolol aad waalid iigu tahay, balse aan kala qarsoonnahay. ( Qaybtii 1aad ) | Awdalpress.com
Aabbe aan maanta kaaga sheekeeyo nolol aad waalid iigu tahay, balse aan kala qarsoonnahay. ( Qaybtii 1aad )
Waxa Daabacay staff-reporter on Jun 25th, 2017 and filed under Daily Somali News, Education, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Sheekadani, waa mid ka mid ah dhacdooyinka runta ah ee ka dhex dhaca qoysaska, Somalida, Carabta, Afrikaanka iyo shucuubta caalamka kale ee ku nool qurbahan reer Galbeedka, gaar ahaan Yurub, America, Australia iyo meelo kale.
Qisadani kuma salaysna siyaasad, bulsho gaar ah ama dad gaar ah. Ujeeddo gaarna ma xambaarsana. Hooyada wanaagsan ama aabbaha wanaagsan oo keliyana ma tilmaamayso. Waalidka ay carruurtooda sida adag ula dhaqmana ma bar-timaameedsanayso. Laakiin waxa ay cashar u tahay guud ahaan waalidka, gaar ahaanna waalidka la daalaa dhacaya carruurtooda, ee garan la’ meesha ay wax ka qaldan yihiin.
Qoraalkan waxa aad akhristow kala kulmi doontaa qaybo kaa nixiya, qaybo aad ku cibro qaadato iyo qaybo kuu diga amma…. amma ku tilmaama ka waalid ahaan. Marka aad sheekadan oo qaybo ah dhammaysatid ama aad ku dhex jirto, waxan kaaga fadhiyaa in aad aragtidaada ka soo dhiibato, adiga oo farriintaada iigu soo hagaajinaya……. shuceebi@hotmail.com.
Waa maanlin ciideed sida maanta (26/06/2017 ) oo kale, waxan aabbahay Cige u raacay barxadda Hyde Park ee ku tallaala London, ee ay muslimiinta xaafadahayagani ku soo tukanayaan maanta salaadda Ciidda. Xilligu waa subax hore. Waxan aabbahay kula soconnaa; Hooyo Faadumo, aniga oo Maryan ah iyo saddex wiil oo aan walaala nahay.
Aabbahay Cige intii aan wada noolayn iigama baran in aan salaan iyo aabbo mooyaane wax ka badan is dhaafsanno. Maantase waxan doonayaa amma ka fekerayaa in aan aabbahay uga sheekeeyo wax badan oo uu ogyahay amma aanu ogeyn oo ku saabsan noloshayada amma gaar ahaan noloshayda. Taasi oo aanu iiga baran. Balse aan u arko muhiim. Waxanse is leeyahay, ” Tolow muxuu dareemi, haddaad uga sheekayso arrimaha qaar.”
Waa sida aan u haystee, aabbahay waa miskiin, Ilaahay isugu daray dulqaad iyo naxariis. Waa aabbe mar walba u darban hawshiisa, daryeelkayaga iyo danta reerka. Laakiin dhinaca guriga waxa aan kula soo bar baaray isaga oo culays badani ka haysto. Mana ahayn odayada asxaabtiisa la soo baashaala, amma suuq joogga ah.
Hooyo Faadumo waa Maammo aad uga da’yar aabbahay, waana quruxlay aad u xarrago badan una asxaab badan. Hooyaday iyo aabbahay aad ayey u kala dabeecad duwan yihiin. Waasa Maammo hawl kar ah oo marka ay shaqo u dhaqaaqdo aad ka yaabayso. Way asxaab badan tahay, had iyo jeerna waxa ay mashquul ku tahay saaxiibbadeed iyo xaflado.
Markii aan salaadda dhammaysannay ayaan aabbahay hoos ugu sheegay in aan rabo maanta in aan wakhti wada qaadanno, si aan u sheekaysanno. Isna waa uu iga aqbalay, waxase uu markiiba hooyo Faadumo u sheegay in aan maanta wakhti wada qaadadayno, oo weliba aan anigu ka codsaday.
Hooyo Faadumo inta ay toos iigu timid ayey igu tidhi, ” Naayaahee, maxaad u doonaysaa inaad aabbahaa kala sheekaysato? Innaga ayaa isku dumar ahe, haddii ay wax jiraan miyaad aniga ii sheegtid? Waaba yaab! …..Maanta ma taasaad keentay! waa innoo guriga”
” Hooyo macaan, khalad ha u qaadan in aan maanta aniga iyo aabbo soo wada baashaallo. Wax aan kaa qarinayo, oo aanad ogayna uma sheegayo. Immigana gabadh weyn ayaan ahay, oo ma doonayo in aan wada nolosheheenna oo wakhti yariba ka hadhan yahay ku khatimo si aan fiicnayn. Adiguna hooyo I aammin, oo khalad ha ka fahmin in aan aabbahay maanta isku gaar noqonno. Waxanan kaa ballan qaadayaa in aan wax kasta oo nolosheennii hore iyo tan immiga aan ku jirraba ka wada sheekaysanno.” Hooyadeed oo ay ixtiraam badan u muuinayso ayey Maryan sidaa ku celisey.
Marka aan sidaa ugu jawaabayo hooyaday, Ilaahay uun baa og waxa calooshayda ku jira. Wakhtigii aan yaraa amma aanan wax badan ku dhiirranayna waan ka soo gudbay. Cabsi iyo fikir kale oo hurdo la’aan igu ridana waan ka koray. Xaquuqda waalidkay igu leeyihiinna waan garanayaa, weligayna kuma xad gudbin labadayda waalid midkoodna, immigana ma jecli in aan sameeyo dhaqan aan la iiga baran.
Aabbe Cige oo inantiisa la hadalayaa waxa uu ku hadalkiisii ku billaabay su’aashan, ” Aabbe weligaa igamaad codsan in aan si gaar u wada sheekaysannee, maanta malaha wax weyn ayaad ii sheegi rabtaa? “
Maryan, ” Aabbe, waa caadi in aan sheekaysanno, weligaybana waan jeclaa in aan wada sheekaysanno, ama aan kaa dalbado amma aad adigu iga dalbatide. Weliba wakhtiyada qaar ayaan aad u jeclaa. Ilaahay ayaanse qorin. Waana runtaa oo dalabkaygani caadi maaha, waayo waanad iiga baran….. kkkkk. Balse, miyaanad ii arag inantaadii oo weyn, oo mas’uul ah, ood wada sheekaysan kartaan? Wax walbana fahmaysa. Wax walbana aad ka wada sheekaysan kartaan. Una bislaatay in ay si waayeelnimo kuula faqdo.”
Aabbo Cige,” Bal ii wad sheekada.”
Xilligu waa subax laga soo baxay salaaddii hore ee ciidda, waxana ay Aabbaha iyo inantiisu xilligaa wada lugaynayaan xadiiqadda weyn ee aan ka yarayn saddex Kilometer oo dhinac walba ah ammaba ka weyn. Labadubana hoos ayey u fooraraan, sheeko aan caadi ahayn ayaanay goordhow bilaabi doonaan.
Maryan ayaa iyada oo aabbeed la hadalaysa hadalkeedii ku bilowdah. ” Aabbe ma ku weydiin karaa, sida aad nolosha qoyskeenna aad Aabbaha ka tahay u aragto, gaar ahaanse siday kuula muuqataa noloshaydii aad igu soo koriseen adiga iyo hooyo? Waxse ma iiga sheegi kartaa, sidii aan ku soo bar baaray, ee aan idinkula noolaa?
Aabbe Ciga: Aabbe waxad I weydiisay su’aal adag, oo aanan si fudud uga jawaabi karin, ee bal ii faah faahi waxa aad ula jeeddo. Haddii kale uga gudub ujeedkaaga, oo adiguba bal iiga sheekeey sida ay nolosheennu kuula muuqato. Amma sidii aan muddada dheer ku soo wada noolayn.”
Intaa markii ay odaygii iyo inantiisii is dhaafadeen, ayey inantii Maryan ooydey, oo illini ka soo daadatay indheheedii. Odayga oo markaa ay is hor taagnaayeen, oo wejigeeda iyo wejigiisu isu beegnaayeen ayey oohintii inantiisu ku noqotay mid lama filaan ah oo qalbigiisa taabata. Waxana maskaxdiisii ku soo dhacay su’aalo badan, oo uu iska weydiinayo, sababta ay inantiisu la ilmaysay, ee ay la ooyeyso. Waxanu ku dadaalay in aanu isna la ooyin oo aanu la qiiroon, ee uu horta dejiyo, weydiiyo su’aalo……Aabbo, maxaad la ooydey? Aabbo ma dhib ayaa jirta? Aabbe Maryan miyaad xanuunsanaysaa? Aabbe wax kasta raalli ayaan kugula ahay ee waxba ha iga qarin.
Maryan: Aabbe waxba iguma dhicin, mana xanuunsani ee 100% waan caafimaad qabaa, wax xun oo immiga ila soo darsay oo aan ka ooyayaana ma jirto, ee waa xasuus waxa aan la ooyayaa……
La soco qaybta danbe.
This post has been viewed 11166 times.
Categories: Daily Somali News, Education, OPINION